Rypple: Mhinduro, Kudzidzisa uye Kuziva | Martech Zone
Chipiri, July 10, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Takaita shanduko ku kushanda muYammer mavhiki apfuura uye zviri kunyatsoita mushe. Kunyange nanhasi, Marty ari kuhofisi, Stephen akashanda husiku hwese pamba, ini ndiri kuBall State, Nikhil ari kuIndia uye Jenn ari kushanda kubva kumba. Kuchengeta mumwe nemumwe achiziviswa, tanga tichivandudza Yammer kuti tigare tichizivana kuti tiri papi, zvatiri kushanda, uye izvo zvatinoda rubatsiro nazvo. Chishandiso chakakura chekutaurirana munharaunda medu musangano.
Ko kana iwe uchikwanisa kutora iwo hurukuro uye wobva wawedzera kumisikidza zvinangwa, kudzidzisa, kuzivikanwa uye mhinduro, zvakadaro? Ndo izvo Rypple anotarisira kuzadzisa se magariro chikuva. Zvese mune yemushandisi ruzivo iyo yakafanana chaizvo neFacebook, saka zviri nyore kushandisa futi. Rypple inondiyeuchidza zvakanyanya Yammer, asi iine mamwe maficha ekuvaka timu uye kuzivikanwa.
Kubasa kwanhasi kunoda nzira nyowani yekuita manejimendi Rypple ndeyewebhu-yakavakirwa padanho rekuita manejimendi manejimendi anobatsira makambani kunatsiridza mashandiro kuburikidza nezvinangwa zvemagariro, kuenderera kwemhinduro uye kuzivikanwa kune chinangwa.
Ko kana iwe uchikwanisa kubatanidza yako yekushandira, kuchengetedza zvibodzwa uye mhinduro zvakananga neCRM yako? Unogona sezvo Salesforce yatenga Rypple kumashure muna Kukadzi. Rypple inosangana zvizere ne Salesforce (uye Chatter). Iyo zvakare mobile-yakagadzirira.
Nei Inbound Vatengesi Vanoshandisa Infographics